Iibhanki umthwalo uxanduva nalapho ukutya zisetyenziswa "amasebe". Trading ngenkani Angera bhanki ngaphandle kokufumana imbuyekezo mhlawumbi kuba nengozi okanye kwandisa iindleko. Iibhanki wazithethelela amasebe ibhanki iya kuba ikhuseleke ngaloo ndlela. Into abathethi kukuba ngaphantsi kukhuselekile ukuba wonke umntu ngaphandle iibhanki ngokwabo. Ayikho enye inkampani bazicingele neebhanki. ofisi Bank Kuphephe lee koovimba. Ukongeza, inkuzi wamisela kuphela iqhezu ezisicaba zizonke. Ingxelo-2011 lwabonisa ukuba inkuzi accounted for kuphela nje ezintlanu ekhulwini zokuqhekeza azenzileyo ezivenkileni kunye neebhanki. Namhlanje kwakhona imali yokuphatha iibhanki cash yokuphatha kuphephe ukuba practice akunakwenzeka yokubamba inkunzi bank.
Iibhanki ukuba uninzi benze ngathi zicocekile kwiibhanki ikheshi Internet. ulwaphulo-mthetho malunga kuye kwaba inguqu ulwaphulo ikhadi lamatyala zihlambulukile amatyala anxulumene zebhanki ngekhompyutha. Kodwa ke kaninzi, ukuba ibhanki ubethwa ulwaphulo-mthetho. iinkqubo ezimbi ebizwa Trojans nga nankathalo infiltrate ibe ikhompyutha lomsebenzisi. Zisebenza ngemvelaphi ithumela lokugqitha ukuze umncedisi we computer. imfuneko Criminal kulo mzekelo nkqu bakhathazeka amakhadi inkohliso ngetyala. Lo mthetho kungathatha indawo usebenzisa ngokupheleleyo esizisebenzelayo ikhompyutha kodwa oko kuthetha ukuba kulula ukufumana imikhondo kuyo. Kodwa kule meko kukho oko kuthiwa goalkeepers abantu kule meko unika ingxelo yakhe ukusetyenziswa mthetho.
Kudla bobubi ikhadi lamatyala abaye kwi ukwenza ulwaphulo-mthetho zebhanki ngekhompyutha. Umzekelo Trojan kukufa A311 ekwabizwa ngokuba Haxdoor. Trojans lwanda nge e-mail. Banking page lokungena enxulumene kaTrojan kunjalo zezibhengezo yenzelwe ukuba akukho mahluko kufuneka kubonwe real. A isixa kakhulu ngokwe imali ingakhutshwa kwi-akhawunti bayakhohliswa ukuthenga nayiphi na imveliso kwi Internet. Trojans ithengiswa kwi-intanethi kwaye ube isixa mali ilungiselelwe ukuba lulungele ibhanki ethile. zonke iibhanki ezine ezinkulu Swedish useke nzima.
Eyokuqala kuphela Riksbank inoxanduva lokulawula imali. Kwi-80 kunye 90 balandela nolungelelaniso kunye nocikizeko (funda bakhubazeke) apho phakathi kwezinye izinto neziphumo kokuvalwa ofisi yeRhuluneli. Kwiminyaka ethile khona inkampani ukuba imisebenzi eza kugxininisa inzuzo kunye neendleko yokonga. It wabizwa Imali e Sweden (PSAB). Le nkampani waba fiasco-mali ze yavalwa ngo-2004 Kwafika nkqubo yangoku yokususwa. Izigqibo kule nkqubo emakethe enemvelaphi yayo kwiBhodi yoLawulo. waba Ngoku I Riksbank kuphela iqhezu lwe data yayo zangaphambili laliphethwe ofisi ezimbini Tumba kunye Mölndal. Kwagqitywa ngo-2013 ukuya imisebenzi kwi-ofisi ongenaqabane Broby abaphatha yamaphepha kuphela. ulawulo lwemali Full weza liqhutywe inkampani yabucala.
Nezinye iiBhanki ezingoovimba kwe Swedish kuba izifundo ziye lubonise ukuba imali yenye yeendlela engambi ukuhlawulela zombini abantu namashishini. Ukongeza yobuqhophololo yekhompyutha ngaphezu ubuqhetseba imali. Ukhuseleko Transport Umbutho ESTA (European Ukhuseleko Association Transport) sele wabonisa kwiminyaka emininzi eyadlulayo ukuba imali le ndlela ithandwa nekhuselekileyo yokuhlawula eYurophu. ESTA wayalela uphando ukuze kulungiswe iibhanki kunye zamakhadi owayefuna ukunyanzelisa kontantlöshet iyonke. Wabonisa ukuba kontantlöshet iyonke waya kulwa kwintando yabantu kwaye wayecinga ukuba abantu ngokwabo bakhethe indlela efuna ukuba ahlawule.
I Riksbank likhethe ukuba lijolise kakhulu kwiziseko kunye nobuchwepheshe endaweni wokhuseleko lwabathengi. Consumer Protection iye endaweni udluliselwe kontantlösfanatiska FSA. Abaxumi ngoko phantse akukho ukhuselo ngokwemiqathango ngemali. Kuba ngathi ingcuka wayeyifundisiwe ngomlomo ukuba bambambe izilangazelelo Red Riding Hood kaThixo. Iingcuka kuphela ezizezabo ezitsala umdla engqondweni.
Kukho izizathu ezibini ezibalulekileyo ukufunda kwiwebhusayithi Riksbank kaThixo. Okokuqala, uyakwazi ukufunda inkqubo eyiyo ukuhluza ngaphandle izibakala kuphela injongo kunye ukunikeza. Okokugqibela kodwa okunga kuncinananga, umntu uyakwazi ukubona ngokucacileyo indlela Riksbank likhuthaza iinketho ikheshi phambi imali. Apha ungakwazi ukufumana uhanahaniso likhulu kwimbali Swedish. Umzekelo ebaluleke kakhulu kukuba oko Riksbank yaye akukho namnye umntu oye isigqibo sokuba sivalwe
ukufakwa kwemali. Makhe phinda ingxelo ye Riksbank ukususela kwicandelo odlulileyo ukucacisa "cala" ebhankini xa vukanganyisi.
"I-National Bank akukho ukulawula imali indlela ezisetyenziswa eluntwini, kodwa ilawulwa yoluntu."
Kwi urhulumente Alliance wamisela iRhuluneli Stefan Ingves wacebisa ungaguquki ukuba izityholo kwi ATM notsalo baya kunciphisa ukusetyenziswa kwemali eSweden. njani loo mazwi kunye cala ngasentla? Wabonisa ukuba isiko iibhanki 'kwamanye amazwe Nordic ziyabhatalisa kuphela imali yokurhoxa for etsalwe ATM kusukela ngaphandle abathengi waye kwanciphisa ukusetyenziswa kwemali. Ukuba ukuhlawula ukurhoxisa imali yabo ayikho ngqiqweni. Kukho ke umbhali hayi Ingves nesiphelo.
"Nxamnye le mvelaphi, sikholelwa ukuba amanyathelo ukomeleza imali ubume kwethenda esemthethweni akabathandi kukuchaza kabanzi inkqubo yentlawulo ngokukhuselekileyo kunye nakakuhle."
Le Ukrwela ezenziwe ngumbhali ukuba bamakishe zifana i Riksbank kaThixo oyikisayo ukuya kwinkampani yabatyalimaliny okanye nayiphi na enye umsebenzisi yabucala kolu shishino. Wena bhala ukuba mthetho kufuneka kubonise ngokwenene.
Ekubeni abaninzi bafuna ulawulo imali ukwandisa umntu kufuneka umamele isininzi. Kodwa kubonakala ukuba le ndoda 'market "kunokuba kuthetha ishishini. akufuneki sifane yinkampani nemali yabucala Ibhanki engundoqo. Ibhanki engundoqo kufuneka abe noxanduva kakhulu ekuhlaleni ukuba icandelo labucala ngeke siphile ngokuvisisana. Ngoko ke, kufuneka asebenzise ulwimi omelwe kwicandelo labucala. Olu hlobo 'tshixa-in "kwi ukwamkelwa jikelele kwemali yeyona nto ilungileyo kwenzeke inkqubo Swedish emali.
Ngenxa inkangeleko unika Bank ilungelo lokukhetha ukuba imali ukuze ubume zomthetho enyanzelekileyo. Kodwa uyakwazi ukubona ngokucacileyo kumbhalo indlela ngayo isondela. Cash semthethweni lula kukuphelisa ngendlela ngaphandle, izivumelwano kunye nezivumelwano. Nantsi Riksbank ukukhusela kwimarike yentlawulo. Ukongezelela kwiingxaki (ukuba kusetyenziswa) yemali kufuneka ibe 'mkhulu kangaka kuchaphazela
abantu abaninzi ukuba imarike kuguga '(ukuze enze into ngayo).
Riksbank ngokwayo ithi ungaguquki ukuba ayenzi ukunika naluphi na ukhuseleko kubathengi kunye namaqela asesichengeni (ngokwemiqathango yokusetyenziswa kwemali). La maqela luyalahlwa ngokupheleleyo yibhanki ngoozwilakhe. Bathi ukuba nje ezimbalwa ukuze akwazi ukuhlawula imali khona ukhetho ikheshi alukho. Nangona ibango ngaphambili ziphikisana ukuba kukho imfuno loluntu ukulawula imali eziinkozo kunye hayi Riksbank. Ufuna njani?
Into nokuzikhethela, akukho indawo esicinga ngayo Riksbank kaThixo. Oku ngakumbi abo banelungelo ukuvula i-akhawunti yebhanki yokusebenzisa imali. Ezi ocetywayo ekubeni "amanyathelo ekujoliswe". Umoya xwebhu kukuba imali yi "lixesha 'kwaye ithintela uphuhliso xa ingxaki ngokusengqiqweni endaweni kufuneka lube ukhetho ikheshi kuba ngoozwilakhe.
"Abadlali Market, kuquka imizi, kuba iindleko zombini ngemali yabo kunye nezinye iindlela intlawulo, kwaye kufuneka ke ngoko zibe ukhululekile ukwenza izigqibo zoshishino malunga indlela yokubhatala ukuyisebenzisa kubo."
"Ukususela nombono woqoqosho kubonakala debit khadi ukuba zitshiphu iintlawulo eziziinkozo kunene izizithsaba-20." (Akukho bungqina oko kukuthi)
"Nangona lophando Riksbank uqobo lubonisa ukuba inani zentengiselwano cash unciphisa, kunzima ukuqinisekisa ukuba loo kunjalo."
Omnye uthi ke ukuba amakhaya ngokwawo kufuneka akwazi ukugqiba yeyiphi indlela yentlawulo bafuna ukuyisebenzisa. Okwangoku, ngaphambili
yintswela kuphela amaqela athile kufuneka babe nelungelo lokusebenzisa imali. It intle kakhulu konke Riksbank kufuneka okugqiba ukuba yintoni na yorhwebo. Emva koko abantu bathobele. Lo mgaqo efanayo naleyo echazwe zwilakhe.
Esi sincoko kwakugcwele amagama kunye nezinto ezifana noshishino, abathathi-nxaxheba kwezorhwebo, iindleko-olusebenzayo nobugcisa-cala. Akukho lwegama likhankanywe kunqubo kunye nedemokhrasi. Abamele abantu Riksbank okanye 'market "ungapheleli? I Riksbank iye ukususela 1600s osibeke maziqhagamshelaniswe kwaye ilawulwa epalamente. Oku unique kwezopolitiko for Sweden. UMgaqo-siseko uthi onke amandla karhulumente eSweden kufuneka ezivela ebantwini kwaye ipalamente abameli zabantu engundoqo. Kwiminyaka engaphezu kwama-150, imali iye ithenda ngokusemthethweni. Nangona evuma ukuba kubonakala ngathi uninzi oluntu ubona mawuhlawule njengelungelo olubonisa Riksbank uye ngokucacileyo ngubani isigqibo.
Le ke Governor Ingves ichazwa nezinye izimvo nemixholo ukuba yonke intlawulo kufuneka bathwale iindleko zabo. Kulula ukuba bathi xa abulele inkqubo yolawulo lwemali ukuze yalahlekelwa kuqoqosho yawo isikali umlinganiselo Iindleko ezizinzileyo ngoko landa ngamandla. Ubakhuthaze emakethe zabucala imali yokuphatha entsha iibhanki ngaphambili engenasizathu kakubi ulawulo lwemali karhulumente kuphela ngenjongo bokuphepha inzalo ubusuku bonke. Iibhanki, xa kusenziwa, abazange ukuhlawula le nkonzo banikela.
Kukho befog wokugxekwa kodwa umntu unako ukuzoba kuphela izigqibo ezimbini. Iibhanki zabucala baba kukungakhathali kakhulu owasebenzisa le nkqubo ukuya max. I Riksbank akazange akwenze ngokwaneleyo malunga imeko ngenxa ukuhluleka, engayenzanga kunye nokuba mathidala. Yonke ibonisa ngokucacileyo ukuba zonke iintlobo iibhanki (kuquka Riksbank) wayeza ukunciphisa imali. Iibhanki zabucala awayeyizondelele ngoko kwimo yangaphambili ngokusebenzisa ngokugqithisileyo imali. Kuyinto isizathu elikhulu esithi imali akaphethanga iindleko zalo. Kuyinto lityala iibhanki '.
Oku "ezilahlekileyo imizuzwana" Akuthandabuzeki ukuba ngxoxo osisiyatha kontantlöshet I nazo ngexesha umsebenzi kwi ncwadi. Oku ngokusondeleyo ilandelwa yi kwingxelo ukuba iisenti amathandathu, anamakhulu nganye ezilahlekileyo ngenxa endiza kwi-ATM. Ingaba nayiphi na khona kunokuba boggles I indlela ingxabano embi kontantlösheten na? Ukuba umntu olahla imali nge ATM yonke imihla konyaka ukwenzela ilahleko theoretical component Mqhayi 22 ngenxa ngokukhawuleza. Ekubeni care kontantlösheten kakhulu malunga iipeni, ibangelwa yechaneke ngaphezulu 21,90. Awu indlela ekubaluleke ngayo ukuba 'inqawe ikwayala "yaye" Moment Second Kubaluleke ".
Yintoni na loo yesibini ngasentla? Isehla kwiitila ngokupheleleyo? Vumela abasebenzi zokubala abasebenza isantya okulungileyo ukusondela ekufeni. Ayeke ukuthetha kwimizuzwana. Isindululo ukucwangcisa amaxabiso uniform kufezekiswe iintlawulo cash kulula nje yotshintsho olululo. A ubisi ange kubiza izizithsaba ezilishumi ngokulinganayo kwaye hayi 9,90. A pair izipikha ziya malini 300 ngokulinganayo kwaye hayi 295. Ububi kakuhle ukuba ezinye wretches kwezorhwebo die bothukile xa utshintsho olukhulu enjalo kuba nobuganga kakhulu. Ithemba tone isigqebelo kwacaca kwisicatshulwa. Mhlawumbi xa iintlawulo imali ngokubetha imizuzwana ikheshi eziliqela nje ngenxa yeso sizathu.
Emva koko, kuthiwa ephepheni ukuba imali esetyenziswa ubukhulu phezulu. Ngokusebenzisa umbhalo uqhuba kwi Imibundu leyo kunye nexesha exhaswa yi igrafu izibalo " 'kwabonakala ukuba oku kunjalo. It ude uthi ukuba iindleko ixhomekeke ngokupheleleyo ixesha elithathwayo ukuhlawula. Ukubala bebesenjenjalo nzima ukuba nithathele ingqalelo le umda kwi nobani okanye miqulu eselugcinwe yokuzibophelela zonqulo. Umntu akakwazi Rave ngokwaneleyo malunga kushishino lwezokhuseleko proven iintlawulo zemali ezi ibiza kancinane. Kodwa ke loo mdlalo ingqondo bathi nelungelo Riksbank kaThixo. Nokuba kutshiphu ukuhlawula nge-credit card ngaphezulu ixabiso ethile.
Kwakhona iceba "neziphumo ezifihlakeleyo kwi yokuziphatha" (eng. Nudging) ukuba akhawunti amakhadi ubabalo. Le nto kutyhefeka ecocekileyo. Ukuba enjalo konke kuphakanyiswa kwindawo ebizwa ngokuba yi-idemokhrasi? Ukuba balwa ndiyalahlekiswa kwamanye uhlobo "inkampu ikhadi lamatyala" like eyenzeka kunye indlela jikelele ukuya umbuso zwilakhe? labemi Sweden kaThixo ufune ilungelo lokuba ukulawula semali eluntwini nto enyanisweni ngaphezu bazivumele ndiyalahlekiswa yi-Riksbank.
Oku, iRhuluneli wam endimthandayo akukho ukhetho okanye isigqibo zabo ukwenza. National Bank iyazingca phezu kwayo "Ingxelo echanileyo." Akufuneki sibizwe iingqikelelo kuba yonke into isekelwe phezu Riksbank kunye ilk yayo ikheshi abantu ngegqudu ukulawula uphuhliso ulwalathiso ikheshi. Yinto engenamsebenzi ukuba "iingqikelelo" kwafezekiswa okubi bomsebenzi labemi. La maphepha mabini yaba umququ lokugqibela. Ngokwenjenje ndivakalisa ukuba idemokhrasi esemthethweni Swedish ngokuba ufile. ukulawulwa I Riksbank kufuneka babe ngabemi bazi ngokucacileyo indawo yazo.